Posted by ကြည်ကြည် at 9:05 AM
မိုးယံ February 19, 2011 at 9:36 AM
တစ်နေ့တော့ မိခင်ပြည်မှာလဲ ဖြစ်လာမှာပါ ဒေါ်လေးရယ်... ဒီလောက်လဲ နေပျော်မနေနဲ့ ဦးသန့် စကားလဲ သိသားနဲ့.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘစ်ပဲဖြာဖြာ
ဒေါ်လေး အဆင်ပြေနေကောင်း ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း
လိပ်ကျောက် February 19, 2011 at 7:58 PM
ဟယ်..ဒါဆို..မယ်ကြည်တို့ ..ကလေးတွေ အားမနာတမ်း မွေးပလိုက်..
လိပ်ခေါင်းတင်မကဘူ..မိချောင်းခေါင်း..ငါးမန်းခေါင်းတွေ..ကိုယ့်ဖာသာ နာမည်ပေးပြီး ဆေးခန်းသွားပြပလိုက်
April22 February 19, 2011 at 9:55 PM
စားပြီးလို့ငွေရှင်းတော့ငွေရှင်းကောင်တာကဝန်ထမ်းကအပြုံးမျက်နှာနဲ့Ki wo tsukete kaetekudasai(သတိချပ်ပြီးပြန်ပါနော်) တဲ့။
Aprilတို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်ရင်းနဲ့Yappri kore danaa (တကယ်ကိုဒါပါပဲလား)လို့ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ခလုပ်ဖွင့်လျှင်မီးလာ၍ ရေဖွင့်လျှင် ပိုးသတ်ထားသောသန့်စင်သည့်ရေ ပိုက်ခေါင်းမှကျသော ထို့အပြင် ၈၀ရာခိုင်နှုန်းသောလူများက တပြေးညီ ရထားစီးကြသော.။ စူပါမားကတ်တွင်ဈေးဝယ်လျှင် ဈေးရောင်းသူနဲ့ ဈေးဝယ်သူကြား ကွဟာမှု့ သိပ်မရှိသော ဒီလိုနိုင်ငံဆိုတာထားအုံး လောလောဆယ်အလွယ်တကူမပင်မပမ်းလုပ်လို့ရတဲ့အရာ......
ကြည်ကြည် February 19, 2011 at 10:04 PM
april22 >> မှန်တာပေါ့ကွယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတစ်လေခံစားမိတယ်လေ။
မိုးယံ>>>ညည်းတောင် လောလောဆယ် နိုင်ချန်ကားမှာလေဟွန်း
လိပ်ကျောက်>>>>မွေးပြီးUS ပို့ လို့ ရမယ်ဆိုမွေးတာပေါ့ ထိန်းပေးမလားဟွန်း... (မီးမီးတို့စကောလာကကျောင်းတတ်စဉ် ကိုယ်
၀န်မဆောင်ရတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာပါတယ်. ကျောင်းသူတွေ မတန်ဘူး.
Anonymous February 20, 2011 at 4:22 AM
မမ ဘလော့ခ်ကို အသစ်တင်တိုင်းလာဖတ်တယ်
မမ အရေးသား ရေးပုံလေးတွေ သိပ်သဘောကျတယ်
မြစ်ကျိုးအင်း February 20, 2011 at 5:33 AM
ဒါကြောင့် ပြန်မယ်တွေးတိုင်း တွေဝေနေမိတာပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုနဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဖက်တော့ ပြန်နေအုံးမှာပါ။
>> avocado ရေ မမကလည်း အပေါင်းသင်းမက်သူပါ။
>>>မြစ်ကျိုးအင်း....မိသားစုနဲ့ပဲပြန်နေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်စိတ်တွေပေါ့သွားတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးတွေစဉ်းစားတော့ သက်ပြင်းချမိပြန်ရော
ဒါပေမဲ့ .. အချိန်တိုင်းအိမ်ပဲပြန်ချင်တယ်.
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူများနိုင်ငံမှာ ကိုယ်က 'အများနဲ့ မသက်ဆိုင်သောသူ' လို့ ခံစားရတယ်လေ..
စူးနွယ်လေး February 20, 2011 at 9:57 AM
အစိုးရသာမန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စရိုက်ကိုသွယ်ဝိုက်စွာ ရေးပြသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဂငယ် February 20, 2011 at 7:13 PM
Han Kyi February 26, 2011 at 3:51 AM
အောင်မယ်လေး ကြားရတာ မုဒိတာပွားလိုက်တာ...ဒီမှာတော့ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ဘာကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ ဈေးသည်တွေ မေ့ကုန်ကြတာ ကြာပေါ့...မူဆိုတာထက် လူတွေကို ပြင်နိုင်ရင်တော့ အခုလို အားကျရတဲ့ ဘ၀က လွတ်ကောင်းပါရဲ့လေ...
Anonymous September 12, 2011 at 3:50 AM
အစ်မရေ ထိုင်းမှာလဲ ပြုံးပြုံးလေးဝန်ဆောင်မှုပေးတာ ခံရတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ စူပုတ်အော်ငေါက်ခံခဲ့ရတာတွေ သတိရမိတယ်။ အမြဲတမ်းနေဖို့ကတော့ အထက်က တစ်ယောက်ရေးခဲ့သလို "အများနဲ့မသက်ဆိုင်သောသူ" လို့ အမြဲခံစားနေရလို့ မလွယ်ပါဘူး။